Ezomndeni · Focus on the Family Africa - iono.fm
FOCUS ON THE FAMILY AFRICA | Podcast , ±5 min episodes every day	|
ZULU South Africa Society & Culture · Religion & Spirituality
Izinkinga zobudlelwano ekubeni ngumzali wengane ezalwa nguwakwakho
Imindeni exubile, iyimndeni esiminingi kulezinsuku. ukuhlangana kwemindeni emibili izoba mndenimunye, ngokwemvelo inezinselelo ezingadinga ukunqotshwa. Kungancika emlandwini wobudlelwane, isibalo somndeni ozongena, neminyaka, nezinga lezingane, ezibandakanyekayo, lomndeni oxubile ungaba ngongathatha izindlela ezehlukene. Kuloluhlelo Ezomndeni namhlanje, sizobuka isimo lakhona indodakazi noyise ongayizali [stepfather] benenkinga ngoxhumano lwabo.
Umzali owahlukanisa unovalo ngengane yakhe esikhulile engawuzwa kahle umshado
Umshado uyisakhiwo esingcwele esadalwa nguNkulunkulu, futhi kunokuningi okuwusizo nokuhle empilweni ekuzinikeleni emshadweni. Ngeshwa ngokunyuka kwezahlukaniso kuleminyaka ,umshado usumanembenembe kwabaningi. Kuyavama ukuba ingane evela kubazali abahlukanisa, ukuba ingabi nkamunkumu ngomshado.
Umfana ozothile nozwelayo
Kukhona yini okungamele kukukhathaze uma umfana ekhombisa ukuthanda ezobuciko kunezemidlalo, kumbe izinto ezimenza azizolele kunalezo ezimenza abe semdlandleni? Ukujwayeleka kwezimo zempilo kwenze ukuba sigcina sesibuka ngeso okungesilo kwelesakheko sengane. Sizosibhunga namuhla lesihloko ngokwezwi.
Ukuthola intando kaNkulunkulu
Kuyenzeka sizibuze ukuthi yikuphi uNkulunkulu afuna ukukwenza ngempilo yethu. Siyazi ufuna simphilele ,kodwa mase kuziwa kwimininingwane kwenza kube nzima nokuthatha igxathi elicacile.Namuhla ohlelweni Ezomndeni sizobuka kabanzi lesihloko, hlala ungasuki.
Umkhwenyana ojeqeza abanye besifazane
Uma unkosikazi enomuzwa wokuthi amehlo omkhwenyana wakhe ade ethi qala uma kuke kwathi shwi owesifazane othandekayo emehlweni akhe, enze njani lonkosikazi? Azithulele futhi athandaze, kungaphindi, kumbe alubeke loludaba kuye phambi kokuba ludlange? Sithanda ukuvuna lowomqondo wesibili bese siletha imininingwane ethe xaxa, khona la ohlelweni Ezomndeni.
Ukubuka ukukipita nezimo zakho nomshado
Sekuvamile ukuba abantu bahlale ndawonye phambi komshado ,hle hle izinkomba ezweni lakithi zikhomba bebancane abakhetha ukushada.Iso lokubuka umshado selingxenye ,yiziphi izinkuthazo zomshado nokuzuzwa kuwo ,nokuthi kungani ababili kumele bawulangazelele? Sizokhuluma kabanzi ngalokho la ohlelweni Ezomndeni .
Unkosikazi wami uyahlukumezana ngokwenyama
Sivamise ukuzithola sikhuluma ngokuhlukunyuzwa la khona umama usuke eyisisulu, kodwa namuhla ohlelweni Ezomndeni sizonceda ubaba obhekene nokuhlukunyezwa ngokomzimba ngunkosikazi wakhe, bese siletha izinyathelo ezisithinta sonke kungakhathalekile ukuthi uhloboni luni lohlukumezo nokuthi ngubani umenzi walo.
Ukuhushula nezempilo zikaMama
Izibalo zokuhushula izisu okwenzeka ezweni lakithi zisezingeni eliphezulu elethusayo futhi kwazona ezibhaliwe azibandakanyi lezo zokuhushula okungagunyaziwe nguhulumeni okwenzeka emahhontshi.Kumbalwa kakhulu lakhona okusuke kuwuhlobo lokuba umama akhethe phakathi kwezempilo zakhe nempilo yomntwana. Zizwele khona la.
Uku ‘adopter’ ingane ehlukumezekile
Uku–adopter yinto enhle kakhulu eseduze nenhliziyo kaNkulunkulu. Wonke umzalwane wafakwa emndenini wakhe, njengokusho kwezwi kwabaseRoma 8,ukuthi si-adopthiwe saba ngamadodana namadodakazi. Uma umndeni ucabanga uku-adopter, kuningi okufikayo, amalungiselelo nokuhlela okuningi okudinga ukwenziwa kuqala. Kwenziwa njani uma kuwukuthi umntwana ozofakwa emndenini useke wabhekana nokuhlukumezeka phambilini? Lezozingane zidinga ngempela ikhaya elifudumele nelinothando. Zizwele sisazokhuluma kabanzi ngalesihloko namuhla ohlelweni Ezomndeni.
Ukungethembeki - Ukwehlukanisa phakathi kokuthethelela nokubuyisana
Uma umuntu ethethelela umuntu akuchazi ukuthi usebuyisene naye.
Umkhwenyana akafuni ukuyosebenza
Impilo yekhaya ingamuncu uma uwakwakho engafune kubamba liqhaza ngokwezimali kumbe nangokunye nje. Umuntu wenzenjani ke ezimweni ezinjalo?
Ukubuka ezezimali kwabasanda kushada
Uma kuziwa kwezezimali, abashadile kumele babe mqondo munye ukuze bavimbe obekungalindelwa ngomunye kanjalo nokuphoxeka ebudlelwaneni babo. Ohlelweni Ezomndeni namhlanje sizokhuluma ngeso lokubuka ezezimali kwabasanda kushada, nokho umgomo wona ungena kuyo yonke imishado.
13 Oct Finding God’s Beauty in Alzheimer’s and Dementia
1 Oct -DELETED- Ukuhuheka phakathi kwabangani abashadile
21 Oct Developing Your Leadership Skills as a Woman
8 Oct Raising Kids with a Kingdom Perspective (Part 2 of 2)
29 Sep Survival Tips for New Dads
25 Oct Helping Engaged Couples Become More We-Focused